IHuawei P30 Lite ifika eSpain ngokusemthethweni | I-Androidsis
IHuawei P30 Lite isungulwe ngokusesikweni eSpain
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo IHuawei P30 Lite yaziswa ngokusemthethweni. Ifowuni yeza kwiintsuku ezimbalwa kamva kunezinye iimodeli kuluhlu lwe-P30. Nangona kungekho nto yayisaziwa ngexabiso eliza kuba nalo ekumiselweni kwayo kwintengiso, nangomhla apho le premium iphakathi kwebanga le-smartphone yayiza kuphehlelelwa ngokusesikweni ezivenkileni. Okokugqibela, oku sele kuyinyani.
Kuba kuyabhengezwa ukuba singayilindela nini loo nto Le Huawei P30 Lite isungulwe ngokusesikweni eSpain. Ukongeza, sikwanalo nexabiso lokuba le fowuni intsha yohlobo lwesiTshayina iya kuba nayo. Yintoni esinokuyilindela kwifowuni?
Kulabo banomdla kule fowuni, ukulinda kuya kuba mfutshane. Njengoko sele kwaziwa, ukumiliselwa kweHuawei P30 Lite kunjalo icwangciswe eSpain ekuqaleni kukaMeyi. Ke akufuneki silinde ixesha elide ukuze sikwazi ukuyithenga ngokusemthethweni.
Ixabiso lale smartphone intsha ikwabonakalisiwe ekusungulweni kwayo eSpain. Abo basebenzisi abafuna ukuthenga iHuawei P30 Lite Kuya kufuneka bahlawule i-euro ezingama-349 kolu luhlu luphakathi lophawu lwesiTshayina. Ixabiso elifanelekileyo, eyayilixabiso elaliphathwa ngokuvuza okuninzi kwezi nyanga.
Ukongeza, bafika benesipho kumsitho wokusungulwa kwayo eSpain. Kuba abo bathenga ifowuni, Bathatha iHuawei FreeBuds Lite njengesipho. Ezi ziintloko ze-Chinese brand, ixabiso lazo li-euro ezingama-119. Kodwa ngokuthenga isixhobo banokufumaneka simahla. Olunye ukhuthazo olulungileyo lokuyithenga.
Le pakethi yeHuawei P30 Lite se beka kwintengiso kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso, kwi-Intanethi nakwiivenkile ezibonakalayo. Ke abo banomdla kule smartphone intsha evela kumenzi waseTshayina abayi kuba nangxaki xa kufikwa ekuyifumaneni. Ucinga ntoni ngexabiso lesixhobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei P30 Lite isungulwe ngokusesikweni eSpain
Ngesi sizathu izikrini zeGolden Fold zophukile, ngokwe-iFixit
Ziyeke iindonga ukuze ubulale utshaba kumlutha weFlaming Core